Cayenne: Atụmatụ na usoro maka ịba ụba ma na-eri ya - Ikkaro
Inicio >> Nature >> Cayenne
Cayenne, ọzọ dị iche iche Capsicum chinense Ọ bụ otu n'ime ose kachasị mma na nke eji eme ihe, enwere ike n'ihi na ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu okpomọkụ, ọ ga-anabata ọtụtụ ndị mmadụ.
Ọ nwere ọtụtụ aha ndị a na-ahụkarị: cayenne, ose cayenne, ose na-acha uhie uhie, ose chili.
O nwere 30.000 to 50.000 SHUs na Scoville n'ọtụtụ.
Ugbu a Ọ bụ oseose nke kachasị mma maka palate anyị nwere n'ụlọ. Ọ na-enye oke ọkụ ọkụ ma na-enweghị oke. Ndị ọzọ na-amasị na habanero ha na-ama na-aga ọnụ ọgụgụ na ọkọ nke ukwuu na Carolina na-ewe ihe ubiHa enweghi ike iche n’iri mmadu, hahaha.
Afọ a chọrọ m nwalee jalapenos.
Otu esi echekwa ha
Ọ na-amasị m iri cayenne ọhụrụ, mana ebe ọ bụ na ọ dị mgbe niile, ị ga-echebara ihe ị ga-eme ha. Anyị nwere ike ịzọpụta ha n'ụzọ dị iche iche.
Kpoo ha ma rie ha mgbe a choro ha.
ghaa ya ma mee uzuzu
azọpịa ya ma gwakọta ya na nnu were nnu oseose
marin ya na mmanụ ka ose mmanụ.
Ndị a bụ ndetu site na afọ m dị iche iche na-azụ.
Ana m azuta osisi okooko abuo n'ime ulo akwukwo. Ha nwere ọmarịcha arụmọrụ, n'agbanyeghị na ha dị n'ime ite ha juputara na cayenne. N'ime oke ohia, ewerewo m chi iri itoolu na abụọ na nke ọzọ 92. Nke abụọ a fọrọ nke nta ka ọ ghara taa, agaghị m echekwa mkpụrụ ya.
N'afọ a, m na-akụ ọzọ site na mkpụrụ sitere na otu n'ime osisi nke afọ gara aga, nke dị nnọọ njọ.
Na 6-2-2020 m na-amị mkpụrụ ma na nke iri m na-akụ ha na ahịhịa ma tinye ha akwa blanket na ọ bụghị ruo oge ọkọchị ka m ga-eburu cayenne. Ihe ọzọ bụ na anyị nọ na Nọvemba ma a ka nwere cayennes na-acha akwụkwọ ndụ.
M na-ekwu banyere ya n'ihi na ọtụtụ oge a na-ekwu na site na mgbe a kụrụ mkpụrụ ahụ ị na-amị mkpụrụ n'ime ọnwa 3. Ma enwebeghị m iberibe tupu ọnwa 5-6.
Na njedebe m kụrụ osisi cayenne 7, mana oge a kama ịkpụ ite, atụgharịwo m ha n'ubi ahụ. N'ihi nsogbu ọrịa na-efe efe, enwebeghị m ike ịgakwuru ya nke ọma n'ihi na anaghị m enwe ike ịgagharị mgbe ọ bụla m chọrọ.
Ohia pere mpe karia afo gara aga ma enwebeghi obere chili na osisi. 70 n'etiti osisi 7, ogologo oge site na 2019 mana ezuru ụlọ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na mgbakwunye na mmiri, ala emetụtala ala ahụ, ala ubi mkpụrụ osisi m nọrọ ọtụtụ afọ na afọ na-enweghị fatịlaịza, na enweghị elekọta.
Ka ọ na-erule 2021, m ga-achọ ịnwale fatịlaịza.
Amụma ahụ bụ ịkụ osisi 6, na ubi mkpụrụ osisi, ma nwalee ala dị iche iche.
Categories Nature Igodo bọtịnụ